Mahajanga Niaka-bidy ny henomby
Samy mikaikaika avokoa ny isan-tokantrano any Mahajanga fa niakatra ny vidin` ny sakafo an-tsena amin` izao fotoana izao.
Niakatra 2 000 ariary ny vidin` ny henan`omby ankehitriny. Vidina 16 000 ariary ankehitriny ny iray kilao raha 14 000 ariary ny vidiny alohan` ny krizy ara-pahasalamana. Ifampitadiavana ny henan` omby ary raha mahita aza dia ratsy ny kalitaony. Nanambara moa ireo mpivaro-kena fa mbola ahiana hatrany ny hiakaran` ny vidin` ny henomby raha mbola mitohy ny fahamehana ara-pahasalamana.